Quality Assurance | Fasteners manokana, ampahany mazava tsara | TIGGES
Makà teny nalaina
Fampandrosoana & Injeniera
Fitetezana orinasa virtoaly
Jereo ny toeram-pamokaranay any Alemaina
Fantaro ny vokatra midadasika sy ny fahaiza-manao
Miasa ao amin'ny TIGGES
Torolàlana momba ny faharetana
Ny ekipanay dia manolo-tena amin'ny fanaovana antoka fa mifanaraka amin'ny zavatra antenainao ny kojakoja mazava tsara rehetra.
Loharano ho an'ny fasteners kalitao
Nahoana izahay no loharanonao
Na mila kojakoja mifandraika amin'ny fiarovana na tsia ny vokatrao - manatitra kojakoja mazava tsara izay maharitra izahay. Ny fifantohanay dia mifototra amin'ny famokarana fasteners manara-penitra na sarotra amin'ny fepetra avo lenta amin'ny andiany kely na lehibe. Jereo ny tenanao izay ataontsika mba hiantohana ny kalitao.
Atombohy ny fangatahana
Fandeferana kely indrindra
Famokarana araka ny tanjonao PPM na Cpk
Laboratory & Quality Test Center
Ny fahamarinan-toerana sy ny SPC-fandrefesana
Tsy misy tongatonga ho azy
Ny fahatokisana tanteraka dia azo antoka ihany koa amin'ny TIGGES amin'ny alàlan'ny fisavana farany sy ny fitsapana kalitao. Ao amin'ny laboratoara manokana dia manao fitiliana concentricity sy 3D ary koa famakafakana micro sy macro na probe fikosoham-bary. Tsy misy tongatonga ho azy fa efa nomanina tsara ny zava-drehetra ary voavaha ny olana fa tsy ifampiresahana fotsiny.
Fandrefesana 3D ● hamafin'ny tany ● fitiliana hamafin'ny ● famakafakana micro / macro ● fitsapana namboarina
Ny dingana no voalohany
Ny dingana dia tonga amin'ny toerana voalohany. Miaraka amin'ny firafitry ny fandaminana ataonay dia miantoka izahay fa milamina foana ny fizotran'ny famokarana ny anjaranao, na izany no baiko voalohany na manaraka.
Cpk metrika isaky ny ampahany
Mpampiasa milina efa voaofana matihanina
Masinina sy fitaovana maoderina
Fanovana fitaovana kajy mialoha
Ny mpiasanay efa voaofana manokana sy mahafeno fepetra dia mandinika ny fanarahana ireo mari-pamantarana kalitao voafaritra. Alohan'ny handaozan'ny ampahany iray amin'ny famokarana, ny milina fitiliana avo lenta sy ny dingana voafaritra tsara dia miantoka fa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa ny zava-drehetra.
Ho fanampin'ny milina fitiliana manokana misy fakan-tsarimihetsika saro-pady, ohatra ho an'ny fanaraha-maso 360° mandeha ho azy, sy ny fitaovana fitiliana natao manokana, misy toby fanasokajiana tanana sy latabatra fitehirizana ho an'ny fivoriambe sy ny fizotrany, izay mitaky asa tanana tena izy.
ISO 14000 dia fianakaviamben'ny fenitra mifandraika amin'ny fitantanana ny tontolo iainana izay misy mba hanampiana ireo fikambanana hanamaivana ny fiantraikan'ny asany amin'ny tontolo iainana.
TS EN ISO / IEC 17025 Fitsipika ankapobeny ho an'ny fahaiza-manao fitiliana sy laboratoara calibration.
ISO 9001 dia faritana ho fenitra iraisam-pirenena izay mamaritra ny fepetra takiana amin'ny rafitra fitantanana kalitao (QMS).
IATF 16949: 2016 dia fepetra ara-teknika mikendry ny famolavolana rafitra fitantanana kalitao izay mahafeno ny fepetra takian'ny indostrian'ny fiara.
Tatitra momba ny kalitao
Amin'ny alalan'ny fanatsarana mitohy, dia mampiomana ny tenantsika ho amin'ny fanamby amin'ny ampitso isika.
Drafi-drafitra momba ny kalitaon'ny vokatra sy ny drafitry ny fanaraha-maso (Fanomanana ny kalitaon'ny vokatra avo lenta). Ireo fitsipika sy fitsipika fototra iorenan'ny APQP: IATF 16949
ISO 14000 dia Familie von Normen für das Umweltmanagement, die Organisationen dabei helfen soll, die negativen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt zu minimieren.
Fizotry ny fankatoavana ny ampahany amin'ny famokarana. Ahitana ny fepetra fototra amin'ny fakana santionany ny famokarana sy ny piesy rehetra ho an'ny indostrian'ny fiara araka ny IATF 16949.
Nifanakalozana teo amin'ny mpamatsy sy ny mpanjifa ho ampahany amin'ny fitantanana ny kalitao raha misy fitarainana.
Mitaky kalitao avo lenta ny kojakoja marim-pototra ataonay - manantena toy izany koa izahay amin'ny mpamatsy anay.
Boky torolalana ho an'ny mpamatsy
Ny Boky Torolàlana ho an'ny mpamatsy dia antontan-taratasy mamatotra. Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifanarahana eo amin'ny TIGGES GmbH & Co. KG sy ny mpamatsy izany ary efa manankery eo amin'ny dingan'ny fanadihadiana mialoha ny fifanarahana. Ny dikan-teny alemana dia mamatotra.
Fandinihan-tena ny mpamatsy
Miaraka amin'ny famoahan-tena ho an'ny mpamatsy dia mangataka fampahalalana fototra momba ny orinasanao izahay. Miorina amin'ny fampahafantarana ny tena, hojerentsika ny halehiben'ny fanombanana ny rafitra fanampiny avy aminay (famakafakana mety) ao amin'ny orinasanao.
Fanamarihana ho an'ny ampahany amin'ny deviation
Miaraka amin'ny fanampian'ity fangatahana ity dia voamarika ny singa misy tsininy.
Izay fiviliana kasaina dia tsy maintsy ampandrenesinao amin'ny fampiasana an'ity antontan-taratasy ity.
Fifanarahana fanomezan-toky ny kalitao (QAA)
Ny QAA anay dia mamaritra ny fepetra faran'izay kely indrindra amin'ny rafi-pitantanana ny kalitaon'ny mpamatsy ary mandrindra ny zo sy adidy momba ny fiantohana ny kalitao ho an'ny vokatra atolotra.
Ity Torolàlana momba ny faharetana ity dia manome izay andrasan'ny TIGGES amin'ireo mpamatsy anay, mba hihetsika maharitra amin'ny rojo famatsiana manontolo.
Fifanarahana fiantohana kalitao
Tombanan-tena ny mpamatsy
Copyright © 2022 TIGGES Group. Zo rehetra voatokana.